Mmiri mmiri: ihe ha bụ, mgbe ha mere na ụdị dị iche iche | Network Meteorology
Portillo nke German | | Emelitere na 25/07/2018 11:02 | Ciencia
Na-ebugharị, ihe ahụ na-eme ka ụsọ osimiri nwee oge sara mbara na oge ndị ọzọ pere mpe. Ihe ndi a bu mmeghari oge buru ibu nke otutu mmiri site na ike ndọda nke ọnwa na anyanwụ na-arụ n'ụwa. Mgbe ị na-ekwu maka ebili, ị nụrụ maka ndụ na neap tides. Kedu ihe bụ nke ọ bụla na na gịnị ka ịdị adị ha dabeere?
Ọ bụrụ n’inwere mmasị n’ihe a niile, lee, ị ga - achọta ozi niile gbasara otu ebili mmiri si arụ ọrụ, kedu mmiri mmiri na ụdị ha. You chọrọ ịnọgide na-agụ? 🙂
1 Iju mmiri na okirikiri ya
2 Ndụ na neap tides
3 Tdị ụdị mmiri
3.1 Mmiri mmiri
3.3 Equinoctial perigee mmiri tides
4 Gini mere na odighi ebili mmiri n’osimiri Mediterenian?
Iju mmiri na okirikiri ya
Ọnwa na Anyanwụ na-arụ ọrụ ndọda n’elu ụwa nke na-eme ka igwe mmiri ndị a na-agagharị. Mgbe ụfọdụ ike ndọda nke mma na-arụkọ ọrụ na inertia nke na-emegharị ntụgharị ụwa na ebili mmiri na-apụtawanye ìhè. N'ihi ọnwa dị nso na mbara ụwa anyị, ọrụ ọ na-ewepụta n'ọbara mmiri karịrị nke Anyanwụ.
Goeswa na-agagharị onwe ya kwa awa 24. Ọ bụrụ na anyị eguzo n’èzí, anyị ga-ahụ etu ụwa na ọnwa anyị si agbakọ otu ugboro n’ụbọchị. Nke a ga - eme ka mmadụ chee na ọ na - enwe otu ihe n’abalị iri abụọ na anọ ọ bụla. Otú ọ dị, ha na-emepụta na okirikiri nke ihe dị ka awa 12. Gịnị kpatara nke a?
Mgbe ọnwa dị na mbara igwe nke oke osimiri, ọ na-adọta mmiri ma na-ebili. Nke a bụ n'ihi na ụwa na ọnwa na-etolite usoro na-agagharị na etiti ntụgharị. Mgbe nke a mere, n'akụkụ ọzọ nke ụwa, usoro ntụgharị nke na-ebute ike ikuku etiti na-ewere ọnọdụ. Ike a O nwere ike ime ka mmiri dị elu na-akpata ihe anyị na-akpọ nnukwu ebili. N’ụzọ dị iche, ihu mbara ụwa na-eche ihu ọnwa nke ihe ndọda ndọda na-emetụtaghị ga-adị ntakịrị.
Igha mmiri abụghị otu ihe mgbe ụfọdụ dịka ụfọdụ ihe na - ekpebi ikike ya. Ọ bụ ezie na amaara na okirikiri dị n'etiti obere na nnukwu ebili bụ awa 6, n'eziokwu ọ bụghị kpamkpam otu ahụ. Iswa ejikọtaghị naanị mmiri. Ọ bụ na e nwere kọntinent, geometries n'ụsọ oké osimiri, profaịlụ omimi, oké ifufe, mmiri mmiri na ifufe na-emetụta ebili mmiri.
Ndụ na neap tides
Dị ka anyị siri nwee ike igosi, ebili mmiri ahụ dabere n’ọnọdụ ọnwa na Anyanwụ. Nke a na-eme mgbe anyị nwere ọnwa ọhụụ ma ọ bụ ọnwa ọhụụ. Ọnọdụ a na-eme ka ebili mmiri dị elu ma na-akpọ mmiri iyi.
N’aka nke ozo, mgbe onwa, uwa na anyanwu guzobere uzo nnuku aka nri, ike ndọda di ntakiri. N'ụzọ dị otú a, a maara ya dị ka mmiri mmiri. Nke a na-ewere ọnọdụ n'oge ịme waksị na oge ebelata.
Iji dokwuo anya echiche ndị a niile, anyị ga-ahapụ ụfọdụ nkọwa ndị bara ezigbo uru:
Nnukwu mmiri ma ọ bụ nnukwu ebili mmiri: Mgbe mmiri mmiri rutere n'ọkwa kachasị elu n'ime okirikiri mmiri.
Obere mmiri ma ọ bụ obere ebili: Mgbe mmiri larịị nke tidal okirikiri esịmde ya kacha nta ozo.
Oge ebili mmiri dị elu: Ọnọdụ nke ebili mmiri ma ọ bụ oge kachasị elu nke oke osimiri dị na oge enyere.
Oge tide dị ala: Oge nke oke mmiri ma ọ bụ obere njupụta nke oke osimiri na-eme na ebe ụfọdụ.
Ihe efu: Obu oge n’etiti oke mmiri na ebili.
Na-eto eto: Oge n'etiti oke ebili mmiri na oke mmiri
Tdị ụdị mmiri
E nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche na - arụ ọrụ n’ime mmiri, ma, ya mere, e nwere ọtụtụ ụdị.
A maara ha dị ka syzygies. Ha bụ mmiri iyi mmiri na - apụtakarị, ya bụ, ndị na - ewere ọnọdụ mgbe ụwa, ọnwa na anyanwụ na-kwekọọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka ike na-adọrọ adọrọ dịkarịsịrị elu. Nke a na eme na oge ọnwa zuru oke na ọnwa ọhụụ.
Mgbe oge opupu ihe ubi a na-eme, a na-agbakwunye ihe nkwonkwo ọzọ. Nke a na - eme mgbe kpakpando kwadoro na ụbọchị dị nso na mmiri ma ọ bụ mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ. Ọ na-adị mgbe Sun na-anọ n'ụgbọelu nke ikuku ụwa. N'okwu a, mmiri mmiri na-esi ezigbo ike.
Equinoctial perigee mmiri tides
Typedị mmiri opupu ihe ubi a na-eme mgbe ihe niile a dị n’elu pụtara na, na mgbakwunye, ọnwa na-adị na usoro ya. Nke a bụ mgbe oke mmiri dị elu karịa karịa oge ọ bụla n'ihi ịdị nso nke ọnwa na Earthwa. Na mgbakwunye, na ịhazi ọnwa, Earth na Sun na-akpa ike ndọda dị ukwuu. Mgbe ebili mmiri a na-eme, osimiri kachasị emetụta na-ebelata ihe karịrị ọkara.
Gini mere na odighi ebili mmiri n’osimiri Mediterenian?
Otu ihe ị ga-amataworị bụ na ebili mmiri n'Oké Osimiri Mediterenian enweghị ọnụ. Nke a mere dịka ọ bụ oke osimiri mechiri emechi kpamkpam.. Naanị ụzọ ọhụụ ọhụrụ ya "ọhụụ" bụ site na Strait nke Gibraltar. Ebe ọ bụ na ebe mmiri a pere mpe, ọ gaghị amị ọtụtụ lita mmiri site n'Oké Osimiri Atlantic. Yabụ, nnukwu mmiri a ka edobere n'ime ụdọ. Eziokwu a na - eme ka Strait na - eme dị ka mgbidi nke emechiri. Na mgbakwunye, ọ na - emepụta ụzọ ntinye dị ike mana enweghị ike iru Mediterenian.
Enwere ike ịsị na ezughị oge maka Mediterranean maka ebili mmiri. Enwere ike ịkele ya ntakịrị n'ime oge ndị ahọpụtara, mana ha esighi ike. N'oge nzuzu, ndị ọzọ na-eme na Strait a na - ewepụta oke ike na - aga Atlantic.
E kwesịkwara ịkọwa ya na ịbụ obere osimiri, mma nke ọnwa dị obere. Enwere ọtụtụ isi na ụsọ mmiri na ọ ruru naanị centimeters.
Na 2016 Alfonso Cuenca buru amụma banyere mmiri mmiri na-ezighi ezi karịa ka ọ dị. Na mgbakwunye, o kwuru na ọdịda na udu mmiri ga-abụkwa akọrọ. N’afọ 2017, mmiri ozuzo ga na-eto eto, belụsọ n’ememe Ista na gburugburu ya.
Na amụma a, ọkachamara anyị bụ cabañuelista emeghị ihe ọjọọ ebe ọ bụ na 2016 na 2017 bụ afọ kachasị njọ na akụkọ ntolite.
Enwere m olileanya na ị nwere ike ịmatakwu ihe mmiri mmiri na-apụta na ụdị dị. Idahaemi ana afo odụn̄ọde mmọ man anam se ekpepde.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mmiri mmiri